Ukuxubana kwe-Ultrasonic Kwekhonkrithi ephezulu-yokusebenza - Hielscher Ultrasound Technology
Ukusetshenziswa kwe-micro-nanosilica noma ama-nanotubes kuholela ekuthuthukiseni amandla okucindezela ekukhoneni okuphezulu. I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokuxuba, ukuxuba nokusabalalisa kwama-nanomaterials samakhemikhali noma ukhonkolo.
I-silika encane isetshenziselwa kakhulu ukukhonkolo namhlanje, okuholela ekusebenzeni kwamandla aphezulu okucindezelayo noma ama-concretes angamelana namanzi namakhemikhali. Lokho kunganciphisa izindleko zempahla nokusetshenziswa kwamandla. Ama-nanomaterials amasha, njengawo i-nano silica noma ama-nanotubes kuholele ekuthuthukiseni phambili ekumeni nasekuqiniseni.
Ulwazi Lokungena Ngokweqiniso
Ukhonkolo lwakhiwe I-Cement, isib. i-Portland samente nezinye izinto zokwakha, ezifana nomlotha we-fly kanye nesimiso se-slag, isamba (igravel, i-limestone, i-granite, isihlabathi), ama-admixtures wamanzi namakhemikhali. Ama-admixtures ajwayelekile afaka ama-accelerators noma abazilahlezi, ama-plasticizers, i-pigments, i-fisiki fume noma i-High Reactivity Metakaolin (i-HRM). I-silica encane iyinhlanganisela ekhoneni. Ukungahleleki kwayo kuyindleko ephakeme kakhulu kanye nokungcola okuthinta opharetha’ impilo.
Ucwaningo Lwezokukhonta Nokuthuthukiswa
Ucwaningo oluphathekayo lubuka izinto kanye nezinqubo ku:
ukunciphisa izindleko zempahla nezindleko zamandla
thola ukuphikiswa kokuqala nokugcina
ngcono amandla nokuqina okucindezelayo
ukuthuthukisa ukuguguleka, ukuphelelwa amandla nokuqedwa
ukuthuthukisa ukuqina nokunciphisa ukufaneleka
ukunciphisa ukuphazamiseka kokukhwabanisa, izinkinga zokuthungatha nokudambisa
ukumelana kwamakhemikhali, isib. ukuphikiswa kwe-sulfate
I-Cement And Mixing Concrete
Uma kuziwa ekuthuthukisweni kwezakhiwo zekhonkrithi, ukuxuba ubuchwepheshe kubalulekile njengokwakhiwa kokhonkolo. Ukuxuba kuyisinyathelo esibalulekile ekukhiqizeni umfaniswano, ikhwalithi ephakeme yekhwalithi. Nakuba imihlahlandlela eminingi nemigomo, isib. DIN EN 206 ihlanganisa ukubunjwa kokukhonkolo kanye nezingxenye zayo, inqubo yangempela yokuxuba i-samente nokuxuba ukukhonkolo ishiywe kumsebenzisi.
Kuyinto eqondile ukuthi amanzi, amakhemikhali nama-admixtures ahlakazekile ngokufanayo futhi asakazwe phansi esikalini esihle futhi ukuthi izimbulunga zihlakazekile ngokwanele. Ukusabalalisa ngokwanele imiphumela noma ukuguqulwa komkhiqizo endaweni engaphansi kwekhonkrithi. Ngenxa yokuqukethwe kwamanzi aphansi kanye nesilinganiso esiphezulu se-admixtures, ukuhlanganiswa kokukhonkisana kokuzihlanganisa (SCC) kanye nekhonkrithi ye-ultra high (UHPC) kudinga isikhathi eside sokuxuba noma ubuchwepheshe bokuxuba obusebenzayo.
Phakathi ne-hydration yemikhiqizo ye-nanoscale hydration, ifomu le-calcium hydrate ekhonkheni enzima. Nano izinhlayiya ze-silika noma ama-nanotubes aphenduka ama-nano izinhlayiya zesimanje ngenkathi kuqiniswa ukhonkolo. Izinhlayiya ezincane ziholela ekuncinteni kwezinhlayiyana ezincane futhi okuncane kakhulu futhi okuncane kakhulu. Lokhu kwandisa amandla okucindezela futhi kunciphisa ukukhishwa kwemvelo.
Ukulimaza okukhulu kwe-nanosize powder nezinto zokwakha, kodwa-ke, ukuthambekela kokwakha ama-agglomerate ngenkathi kuncibilikisa nokuxuba. Ngaphandle kokuba izinhlayiya zomuntu ngamunye zihlakazeke kahle, ukuqhuma komzimba kuyanciphisa ukukhanya kwezinhlayiya ezibonakalayo eziholela ezakhiweni ezingaphansi kwekhonkrithi.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nezinzuzo zokuxubana kwe-ultrasonic yamadayimenti e-precast, izitshalo ezomile nezitshalo.
Ultrasonic Ukuxuba Of Nanomaterials
Ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu yokuxuba, Ukuhlakazeka kanye nokwahlukana. Isithombe ngezansi sibonisa umphumela ojwayelekile we-ultrasonic ukusabalalisa i-silika ene-fumed emanzini.
Ukuqala (ijika eliluhlaza) ngosayizi wezinhlayiyana ze-agglomerate ezingaphezu kuka-200 micron (D50) iningi lalezi zinhlayiya zancishiswa zibe ngaphansi kwama-nanometer angama-200.
Ukuxuba i-Ultrasonic kunoma yisiphi isikali
I-Hielscher inikeza amadivaysi okuxuba ama-ultrasonic okusetshenziselwa ukucwaninga nokucubungula okugcwele kwezinga.
Ucwaningo Lwezobuchwepheshe Nokuthuthukiswa
Hielscher Amadivayisi we-Ultrasonic Laboratory iyithuluzi elihle lokuxuba le-laboratory R&D. Amadivaysi omshini ngokuvamile asetshenziselwa ukuxuba ama-ultrasonic amaqoqo amancane. Amadivaysi e-Hielscher ultrasonic anikeza ukulawulwa kwepharamitha olunembile nokuphindaphindiwe okuhle kakhulu kokulungiswa kwesilinganiso. Lokhu kwenza kube lula ukuxuba amafomu ahlukene futhi unqume umthelela wokuqina kwe-ultrasonication nobude bokunikezwa kwe-sonication.
Ukuxuba i-Ultrasonic Ekukhiqizweni
Imishini yokuxuba i-ultrasonic edingekayo ukuze iphakanyiswe inganqunywa ngokuqondile ngokusekelwe ekuhlolweni kwebholabhu. Ithebula elingezansi libonisa izincomo zedivayisi jikelele ngokuya ngevolumu ye-batch noma izinga lokugeleza okufanele licutshungulwe.
Abaxube be-Hielscher ultrasonic bavame ukufakwa ku-inthanethi. Le ndaba iqhutshelwa ibe yisitoreji se-ultrasonic. Lapha kuvezwe cavitation okukhulu ultrasonic. I-sonication encane iqeda ukudlula njengoba zonke izinhlayiya zidlula ikamelo lokuxuba emva kwendlela echaziwe. Ngakho-ke, i-ultrasonication ngokuvamile ishintsha i-particle size distribution distribution curve esikhundleni sokwandisa.
An reactor ultrasonic mixing siqukethe flow flow cell kanye i-sonotrode. Awekho okudingekayo okudingekayo. Ama-reactor cell (i-stainless steel steel) anezijometri ezilula futhi angakwazi kalula kalula futhi ihlanzwa. Awekho ama-orifice amancane noma amacembe abufihliwe.
Ezinye Izicelo Zama-Ultrasonics For Cement And Concrete
Ukusetshenziswa kwamadivayisi we-Hielscher ultrasonic ekulungiseni amakhemikhali kanye nama-concretes akukhawulelwanga ekuxubeni nasekuhlakazeni ama-premixes e-samente noma okukodwa. I-Ultrasound iyindlela ephumelela kakhulu ye i-degassing yeziphuzo kanye nama-slurries. Lokhu kunciphisa inombolo nenani lamabhulebhu egesi abanjwe kukhonkolo ngemuva kokuqina.
Amadivayisi we-ultrasonic sieving ukuthuthukisa i-passput kanye nekhwalithi ye-powder sieving yezinhlayiyana ezincane. I-Hielscher inikeza ama-sieve avuselelwe ama-ultrasonically for application lab laboratory kanye nezimboni.
Cela ulwazi mayelana nokuxuba kwe-ultrasonic!
I-Ultrasonic Inline Mixer (UIP1000hd)